शुक्रबार एउटा, शनिबार अर्को गाडीमा बलात्कार ! – Chautari Online
October 4, 2020 268
१८ asoj,काठमाडौं । प्रहरीले सार्वजनिक बसमा १६ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । एक जना फरार छन् ।
भक्तपुर प्रहरीका डीएसपी केशव थेबेका अनुसार शनिबार बिहान ११ बजेसम्म युवती उनीसँगै बसेको पाइएको छ ।
त्यसपछि युवतीलाई बा ३ ख २६१२ नम्बरको बसका चालक खड्का र सह–चालक श्रेष्ठको जिम्मा लगाए । उनीहरुले गाडीमै पटकपटक युवतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको पाइएको भक्तपुर प्रहरी प्रमुख एसपी तारादेवी थापा बताउँछिन् ।
परिवार खोज्दै प्रहरी
डीएसपी थेबेका अनुसार पीडित युवतीको जिल्ला अस्पताल, भक्तपुरमा स्वास्थ्य परीक्षण भइसकेको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार युवतीले हालसम्म घटनाबारे स्पष्ट विवरण बताइसकेकी छैनन् । ‘धेरै तनाव भएर हुनसक्छ, हामीले प्रेसर पनि गरेका छैनौं’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘परिवारसँग सम्पर्क गर्ने कोशिस गरिरहेका छौं ।’
उनलाई काउन्सिलिङ गरेर थप अनुसन्धान थाल्ने प्रहरी तयारी छ । रत्नपार्कबाट उनलाई ल्याउने तेस्रो व्यक्तिको पीडित युवतीसँग चिनजान थियो/थिएन भन्ने विषयमा हालसम्म खुलिसकेको छैन । एसपी थापा भन्छिन्, ‘उनी पक्राउ परेपछि घटनाबारे विस्तृत विवरण खुल्छ ।’
Prevकस्तो सपनाको फल के हुन्छ ?यस्तो सपना देखे भाग्यमानी बन्ने संकेत !
Nextकिशोरको बयान : दाजु विदेशमा, घरमा सबै सुतेपछि भाउजु आउनुहुन्थ्यो, बच्चा होला भन्ने थाहा थिएन !